Imtaxaankii Shahaadiyaga ee Dugsiyadda Sare iyo Dhexe ee Somaliland oo Si Rasmi ah Loogu Dhawaaqay – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Guddida Imtaxaanaadka iyo Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijadda Imtaxaanaadka sanad-dugsiyeedka 2015/2016.
Gudoomiyaha Xafiiska Imtixaanaadka Qaranka Md Daa’uudAxmed Faarax oo la hadlay saxaafadda waxa uu sheegay in tirade guud ee sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee dalka ay ahaayeen shan iyo toban kun iyo labaatan Arday oo wax ka baranayey 357 school, waxaana hadhay oo ka dhacay imtixaanaadkii dugsiyadadhexe arday gaadhaysa 643 arday, halka ay gudbeen oo baaseen arday tiradoodu ka badan tahay 14377 oo arday.
Dhanka kalena dugsiyada sare ee dalka oo tiradoodu gaadhayso 108 school waxaa imtixaan ugu fadhiistay arday gaadhaysa 9911 arday kuwaas oo 312 ka mid ahi ay ku dhaceen imtixaanka isla markaan ay gudbeen ardaydii kale oo tiradoodu gaadhayso 9599 arday.
Gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku waxa kale oo uu sharaxay ardayda kaalimaha koowaadu gashay imtixaanaadkaasi iyo schoolada ay wax ka bartaan.
Halkan ka daawo warkaasi oo aanu ka soo xiganay wakaaladda SOLNA: